Usuku lokubhiyozela omama! | Martech Zone
NgeCawa, Meyi 13, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Usuku lukaMama yiholide yesithathu enkulu yokuthengisa ngonyaka ngaphezulu kwe- $ 3 yezigidigidi ezichithwe eMelika nje. I-22.3% yabantu baseMelika bathenga ubucwebe boSuku looMama, i-35.5% inyusa unyaka ngonyaka. Ngapha koko, ukuchitha konke ngesipho soSuku loMama kulindeleke ukuba kunyuse i-6.8% ngonyaka ngaphezulu konyaka.
Ngaba ukhe uzibuze ukuba kutheni uMhla woMama ubaluleke ngaphezu koSuku lukaBawo? Ngaba uyazi ukuba uSuku looMama ibiyiholide yesizwe ngaphezulu kwesiqingatha senkulungwane? Ungakholelwa ukuba besinokuxelela ukuba bekusoloko kukho oomama abaninzi kunootata? Ewe, ubungqina bubhaliwe ngokoqobo kwi-DNA yethu. Ingcali yomvuzo
Nantsi i-infographic engakholelekiyo eyalatha kwimbali yoSuku loMama kunye notshintsho kwinkcitho yabathengi kule holide ibalulekileyo. Emva kwayo yonke loo nto, akukho namnye kuthi ngewayelapha ukuba bekungekho nto kuthiwa ngumama! Usuku lokubhiyozela omama!
tags: iiholidekwi-infographicUsuku lomama